ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ နိုင်ငံခြားဧည့်ဝင်ကြေး တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်ကိစ္စ ရှေးဟောင်းဥပဒေအရ ဒီဇင်ဘာလမှသာ စတင်ကောက်ခံတော့မည် | Tomorrow News
» ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ နိုင်ငံခြားဧည့်ဝင်ကြေး တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်ကိစ္စ ရှေးဟောင်းဥပဒေအရ ဒီဇင်ဘာလမှသာ စတင်ကောက်ခံတော့မည်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ နိုင်ငံခြားဧည့်ဝင်ကြေး တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်ကိစ္စ ရှေးဟောင်းဥပဒေအရ ဒီဇင်ဘာလမှသာ စတင်ကောက်ခံတော့မည်
Submitted by Pho Lapyae on Wed, 06/14/2017 - 11:30
ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ နိုင်ငံခြားဧည့်ဝင်ကြေးကို ယခုလအတွင်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည် ဖြစ်သော်လည်း ရှေးဟောင်းဥပဒေအရ ခြောက်လကြိုတင် အသိပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာလမှသာ မူလရှစ်ထောင်မှ တစ်သောင်းကျပ်သို့ တိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးမှ သိရသည်။
“စေတီတော်ကို ရည်မှန်းပြီးတော့ လှူဒါန်းထားတဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ ဆိုင်ခန်းအပြင် ဧည့်ဝင်ကြေးကနေရတဲ့ အလှူငွေဆိုပြီး စေတီတော်မှာရတဲ့ငွေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ခြောက်လဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း နိုင်ငံခြား ဧည့်ဝင်ကြေးကို ပြောင်းလဲရင် ခြောက်လကြိုတင်အစီရင်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ ပြောင်းလဲလိုက်တာပါ”ဟု အဆိုပါအဖွဲ့မှ ရုံးအဖွဲ့မှူးဦးထွန်းအောင်ငွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဧည့်ဝင်ကြေးနှင့် ဆိုင်ခန်းများမှ ရရှိသည့်ဝင်ငွေများသည် စီမံခန့်ခွဲမှုဝင်ငွေဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါငွေမှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဝန်ထမ်းများ၏ လစာများကို အသုံးပြုနေကြောင်းသိရပြီး ထိုသို့ ပြောင်းလဲကောက်ခံမှုကို စီစဉ်ရခြင်းသည် ပြန်အမ်းငွေအခက်အခဲရှိခြင်းအပြင် နှုန်းထားသစ်နှင့် ကောက်ခံပါက အလှူငွေပုံးအတွင်း ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်အတွင်း နိုင်ငံခြားဧည့်သည် ၆ သိန်းကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ရာ ယင်းမှ ဧည့်ဝင်ကြေး ၅ ဘီလီယံခန့် ကောက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ယခင်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ နိုင်ငံခြားဧည့်ဝင်ကြေးကို ဒေါ်လာဖြင့် ကောက်ခံခဲ့ရာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေ…. ကျွန်တော့်ကို စိတ်မပျက်ဘူးလား - ဇော်သက်ထွေး
၈၈၈၈ သမိုင်းပြတိုက် ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြုစာရင်းဝင်ရေး ကူညီရန် တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးနှစ်ဦး ရောက်ရှိ
၂၀၂၀ မှာ NLD နှင့် ၈၈ နိုင်ငံရေး အပေးအယူ မလုပ်ခဲ့လျှင် - လက်စောင်းထက်
လစဉ်ချီးမြှင့်ငွေ ရှစ်သောင်းကျပ်သာရသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာ အံ့သြဖွယ်ပြိုင်ဆိုင် မုန်တိုင်းထန် - ကိုလူသစ်
၈၈ ခွပ်ဒေါင်းမျိုးဆက်များ နိုင်ငံရေး ဒီရေကျဆင်းချိန် - ဇော်သက်ထွေး
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံး ဒါတွေပြင်ပါ - လင်းသီပာ
R2P အန္တရာယ်နှင့် သွေးစည်းသင့်ပြီဖြစ်တဲ့ လော်ဘီများ - လက်စောင်းထက်
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် AIR KBZ ရွှေအောင်လံ မြန်မာ-ပြင်သစ်-ဂျပန် မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီး ကျင်းပမည်
လူငယ်ဘက်စုံ ဖွံ့ ဖြိုးရေးပွဲတော် ရန်ကုန်မြို့ ၌ ကျင်းပ
ကွီးဖြိုးရဲ့ ရိုက်ချက်အသစ် (သို့) စီးတီးတက္ကစီ - ဦးမျိုးကြီး
December 2014 (127)
February 2015 (86)
March 2015 (76)
May 2015 (71)
June 2015 (49)
September 2015 (120)
Copyrights © Tomorrow News Journal. Designed by AIS